Ukudibanisa i-Ikea Lottorp okanye iwotshi yeKlockis -Ikaro
IKrisimesi ekhethekileyo: LEGO Boost Guide
yokuqalisa >> Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza >> Ukudibanisa i-Ikea Lottorp okanye iwotshi yeKlockis
Ukudibanisa i-Ikea Lottorp okanye iwotshi yeKlockis
Ibizwa ngokuba yiLöttorp okanye iKlockis, ndicinga ukuba balitshintshile igama kwaye yiwotshi elula, isivusi, isibali xesha nesixhobo sokulinganisa ubushushu ethengisa e-Ikea nge- € 4 okanye nge- € 5. I-4 inye. Kukulungele ukuba nayo emakhitshini, kumagumbi, njl. Into emnandi ngale wotshi kukusebenziseka kwayo, kulula kakhulu ukutshintsha phakathi kweendlela zayo zokusebenza, kuya kufuneka ujikeleze iwotshi. Ke, xa ujika, imilinganiselo eyahlukeneyo iya kubonakala kwisiboniso. Iintombi zam ziyaphambana xa ziyibamba. Ngokujika ngakunye, kukhala kunye nokukhanya kombala owahlukileyo kuza :)
Andihlali ndithenga izinto ukuzidibanisa, ndihlala ndisebenzisa into eya kudoti okanye ukuphinda isetyenziswe kwakhona, kodwa ngeli xesha andinakukwazi ukuxhathisa. Ndayibamba ngesandla, ndaba nomdla kakhulu. Ngaba ndiza kuba nakho ukusebenzisa umboniso kunye noArduino? Yiyiphi inzwa abaya kuyisebenzisa ukulinganisa iqondo lobushushu kunye nokufumana utshintsho kwindawo? Ngaba kukho into emnandi enokwenziwa ekubukeni? Kodwa ngaphezu kwako konke, eyona nto indenze umdla kakhulu yile nto ingxolayo yingxolo evulekileyo oyivayo xa uyigungqisa? Kutheni le nto kukho into evulekileyo ngaphakathi? Kwaye hayi kuwotshi, kodwa kuyo yonke.
€ 5? Ngaba ungumthombo wexabiso eliphantsi? Kwi IAmazon iyazithengisa ngee-13 zeedola, evenkileni unayo € 5
Imboniselo eqhumayo okanye indlela yokwahlulahlula iwotshi
Ndema phambi kwexesha ndicinga ukuba iza kuba ngumsebenzi olula. Kodwa kubonakala ngathi i-Ikea ayifuni ukuba sibone i-insides yesixhobo. Akukho sikrufu, hayi ithebhu, hayi uqhekeko umzimba uphela sisiqwenga esinye. Ndijonga kwaye ndikhangela kwaye kuhlala kuphela umphambili. Ke ngazo zonke iintlungu ezisentliziyweni yam ndiya khona, ngaba kunyanzelekile ukuba ndiyenze ngoluhlobo?
Ndiza kukushiya ividiyo ngombono oqhumayo, kodwa ndinenkinga yokuyihlela. Ukuba ndiyifumene ndiza kuyongeza. Inyani yile yokuba khange icoceke :- (Ndohlule isiqwenga ngokungeyomfuneko, ndicinga ukuba ndiphantsi koxinzelelo ngokungayeki ukucinga ukuba ikhona enye indlela.Ngokungayeki ividiyo kwaye uyirekhode ngaxeshanye. Umcebisi olungileyo.
Ukuba ufuna idibanise ngokucocekileyo landela amanyathelo alandelayo:
Kuya kufuneka uphakamise umphambili ngescrewdriver umzekelo, yiplastikhi kuphela ebonakala ngathi iyakhusela.
Uyakufumana isincamathelisi esigubungela yonke isakhelo, ngesikulufu sokuqhuba sihamba sijonga, apho kukho umngxunya uze uskrole, kukho izikrufu kwaye awunyanzelekanga ukuba unyanzele nantoni na
Kulo mfanekiso ulandelayo, jonga ezi ziqwenga zimbini zisekhohlo, zizitshixo zokuyichitha kakuhle.
Nje ukuba ubone indlela yokuyiqhekeza. Ndishiya ezinye iinkcukacha zewotshi enealam ngaphakathi. Yonke ilula kwaye andiziboni izinto ezininzi eziluncedo ziyinyani. Kodwa le bhokisi incinci imhlophe eyenza ingxolo yigugu kwisithsaba.
Ndivula ukuze ndibone ukuba kutheni isenza ingxolo, kwaye jonga. A isivamvo sendawo yoomatshini. Sele siyazi ukuba ilawula njani indawo ekubekwe kuyo iwotshi ukubonisa imowudi enye okanye enye. Emfanekisweni ithe tye, kodwa inene le nto, iwotshi yealam iyahamba nkqo, ukuze ibhola yentsimbi ihlale ichukumisa iiterminal. Kubonakala kum ngendlela enobuchule kakhulu kwaye sinokuziphindaphinda kwiiprojekthi ezininzi.
Ngalo lonke ixesha iwotshi ivuliwe itshintsha imo kunye nombala wesikrini. Oku kuyenza nje ukukhanyisa nge-RGB ekhokelwe
Omnye umfanekiso ukuze ubone elinye icandelo lebhodi kunye nokuba kuncinci kangakanani ukusebenzisa isekethe.
Beep hack okanye indlela yokwenza ukuba iyeke ukwenza ingxolo ngokujika
Xa ndigqibezela iLottorp, ndaqala ukukhangela into eyenziwe ngabantu. Akukho lwazi lungako, awuthethi, izikhombisi ezi-2 okanye ezi-3 kuphela, ewe kukuqhekeza okanye ukuguqulwa okunokuba luncedo. Kungenxa yokuba ukuba kukho into ecaphukisayo malunga nale wotshi, kukuba ngalo lonke ixesha uyiguqula iyalila. Khawufane ucinge ukuba kusentsasa unemo yeqondo lobushushu kwaye ufuna ukubona ixesha kuba xa ulilayitile isibane sikhanyisile kwaye siyabe. Kuyacaphukisa kwaye ungabavusa abantu ohlala nabo. Isonjululwe
Nje ukuba ndiyenze kwiwotshi esihlala siyisebenzisa, ndiza kukuxelela ukuba ihambe njani.
Ikhompyuter yam iyajika kodwa akukho nto ibonakala kwiscreen
Uyibona njani i-IP kwiLinux
I-Lego Boost Hambisa iHub
izigaba Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza Ukuhamba kwetikiti
Ndigqibile ikhosi yokufunda i-Coursera Machine
Iikhalenda zeDodecahedron zika-2018
Amagqabantshintshi ama-7 ku "Ukudibanisa i-Ikea Lottorp okanye iwotshi yeKlockis"
EyoMqungu 2, 2018 e 10:05 pm
Andingomntu ophetheyo kwaphela (isandla esikhulu nje), kodwa kufuneka nditsho ukuba ndiyiphosile iposti yakho, kwaye ndihlala ndinexesha elihle lokuzifunda .. Ndiyathemba ukuba uza kugijima ngo-2018 .. :)
EyoMqungu 2, 2018 e 10:17 pm
Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yakho. Bahlala bexabisana, ngenene :) Masibone ukuba kwenzeka njani u-2018, ngomsebenzi kunye nosapho kunzima kakhulu ukugcina inqanaba lokupapashwa
EyoMqungu 11, 2018 ngo-11: 54 am
Eyona nto ndingathanda ukuyazi kukuba ukudityaniswa (i-eC) kuphantsi kweglobhu emnyama yebhodi ...
EyoMqungu 11, 2018 e 12:55 pm
Ewe, kuba ndicinga ukuba andinakukunceda :-(
Epreli 20, 2020 kwi-6: 54 pm
Iluncedo kakhulu! Enkosi! Kwakufuneka ndidibanise le wotshi kwaye indithintele ukuyonakalisa
Epreli 22, 2020 kwi-8: 25 pm
Ukuba ufumanisa enye into enokuba luncedo, unganqikazi ukusazisa.
EyeDwarha 16, 2021 ngexesha 9:38 pm
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingasifumana njani isibane seRGB ukuba sihlale sivulekile. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela.